Mahazoarivo-Fandriana: Nosakanana tsy handatsa-bato ny kandida Ben’ny tanàna an’ny Tia Tanindrazana
mercredi, 27 novembre 2019 20:00
Nosakanana tsy handatsa-bato teto Ambohimanaiky i Rakotomaharavo Lucien, Ben’ny tanàna amin’ny anaran’ny antoko Tia Tanindrazana ato amin’ny Kaominina ambanivohitra Mahazoarivo, Distrikan’i Fandriana, Faritra Amoron’i Mania.
Ny lehiben’ny Fokontany, sady filohan’ny birao fandatsaham-bato no mbola mpanohana kandida Ben’ny tanàna no nibahana ny tsy hanatontosan’ity kandida Ben’ny tanàna Rakotomaharavo Lucien ity ny latsa-bato androany, teo anatrehan’ny lefitra faharoan’ny lehiben’ny Distrikan’i Fandriana.
Fokontany iray ato anatin’ny Kaominina Mahazoarivo i Ambohimanaiky. Ny lalàna mifehy ny fifidianana dia mamela ny kandida handatsa-bato amin’ny birao fandatsaham-bato ao anatin’ny fari-pifidianana irotsahany hofidiana ; tsy nohajaina anefa izany.
Milaza ny tsy hipetra-potsiny amin’izao ny kandida, fa hitondra ny raharaha amin’ny ambaratongam-pahefana misahana ny fifidianana.